China mkpa Polyimide ekwe FPC na FR4 stiffener emepụta na suppliers | Kangna
Ọkọlọtọ FR4 PCB
Efere Dabere na Board
High Tg osisi
isiike-Flex osisi na ENEPIG imecha
Mpi PCB Manufacturer
Mkpa Polyimide gbagọrọ agbagọ FPC na FR4 stiffener
Typedị ihe: polyimide
Layer gụọ: 2
Min trace obosara / ohere: 4 mil
Min oghere nha: 0.20mm
Emechara mbadamba osisi: 0.30mm
Emechara ọla kọpa: 35um
Solder nkpuchi agba: uhie
Etiti oge: 10 ụbọchị
1.Gịnị bụ FPC?
FPC bụ ndebiri nke mgbanwe biri ebi circuit. ìhè ya, mkpa ọkpụrụkpụ, free ekwe na mpịachi na ndị ọzọ magburu onwe e ji mara bụ mma.
Ndi United States meputara FPC n'oge usoro oghere teknụzụ oghere roket.
FPC mejupụtara a mkpa egbochi ihe polima film nwere conductive circuit nakawa etu esi tinye ya na a na-ewetara na a mkpa polima mkpuchi iji chebe eduzi na sekit na sekit. Ejirila teknụzụ maka ijikọ ngwaọrụ eletrọnịk kemgbe afọ 1950 n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Ugbu a ọ bụ otu n'ime teknụzụ njikọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ọtụtụ ngwaahịa elektrọnik kachasị elu.
Uru nke FPC:
1. Ọ nwere ike gbagọrọ agbagọ, merụọ ma apịaji kpamkpam, hazie dịka ihe achọrọ si dị na mbara igwe, ma mepee ma gbasaa n'ụzọ na-enweghị isi na oghere akụkụ atọ, ka ị wee nweta njikọta nke ngwakọta akụrụngwa na njikọ waya;
2. Ojiji nke FPC nwere ike belata oke na ịdị arọ nke ngwaahịa elektrọnik, imeghari na mmepe nke ngwaahịa elektrọnik na njupụta dị elu, miniaturization, ntụkwasị obi dị elu.
FPC circuit osisi nwekwara uru nke ezi okpomọkụ dissip na weldability, mfe echichi na ala keukwu na-eri. The Nchikota mgbanwe na isiike osisi imewe na-emekwa ka elu maka nta erughi nke mgbanwe mkpụrụ na-amị ikike nke components ruo n'ókè ụfọdụ.
FPC ga-aga n'ihu na-agbanwe site n'akụkụ anọ n'ọdịnihu, ọkachasị na:
1. ọkpụrụkpụ. FPC ga-adị mfe karị ma dị gịrịgịrị;
2. oldkpakọba nguzogide. Ekwe bụ bu pụta ụwa atụmatụ nke FPC. N'ọdịnihu, FPC ga-agbanwe karịa, karịa oge 10,000. N'ezie, nke a chọrọ mkpụrụ ka mma.
3. Ọnụahịa. Ka ọ dị ugbu a, ọnụahịa FPC dị elu karịa nke PCB. Ọ bụrụ na ọnụahịa nke FPC gbadata, ahịa ahụ ga-abawanye mbara.
4. Nkà na ụzụ. Iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ, a ghaghị ịkwalite usoro nke FPC na oghere kacha nta na oghere obosara / akara ntanetị ga-emerịrị ihe ndị dị elu.
Nke gara aga: 8.0W / mk akwa thermal conductivity MCPCB maka ọwa eletriki
Osote: 6 oyi akwa impedance akara isiike-Flex osisi na stiffener
Adreesị:Ala nke anọ, ,lọ A, 2nd West n'akụkụ, West zheng 2nd Road, Shajiao Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China.